चार लाख शब्द समावेश भएको संस्कृत–नेपाली विद्युतीय शब्दकोश - Artha Dabali : nepal economic and business news portal
आइतवार, मंसिर १४ गते २०७७
# सामाजिक उद्यमी
स्वामी केशवानन्द गिरिले विश्वमै ठूलो संस्कृत–नेपाली विद्युतीय शब्दकोश निर्माण गरी सार्वजनिक गरेका छन् ।
यो विद्युतीय शब्दकोशबाट संस्कृत, नेपाली, हिन्दी र अङ्ग्रेजी चार भाषाका शब्दको अर्थ थाहा पाउन सकिन्छ ।
शब्दकोशमा चारवटै भाषाका गरी चार लाख शब्दको अर्थ समावेश गरिएको छ । शब्दकोष एण्ड्रोइड मोबाइलमा डाउनलोड गरी उपयोग गर्न सकिन्छ । यसैगरी वेबसाइटमा केएन स्वामी डटकममा गएपछि चार भाषाका करिब चार लाख शब्द खोज्न सकिने शब्दकोश निर्माणकर्ता स्वामी केशवानन्दले बताए । यी चार भाषाका शब्द ‘फूल टेक्स्ट’ खोज्न यो एप र वेबसाइट उपयोगी हुनेछ । एउटा शब्दको चारै भाषाका अर्थ थाहा पाउन सकिनेछ ।
शब्दकोशमा संस्कृतबाट नेपालीका एक लाख, संस्कृतबाट संस्कृतका डेढ लाख, संस्कृतबाट हिन्दी ५० हजार र संस्कृतबाट अङ्गे्रजीका ५० हजार गरी चार लाख शब्द सामावेश गरिएको छ । धातु र त्यसको कृदन्त रूप ५० हजार गरी चार लाख शब्दको ज्ञान कोशबाट वेबसाइट वा एपमा गएर हेर्न सकिने गरी समावेश गरिएको उनले बताए ।
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न गत वर्ष चैतमा सरकारले बन्दाबन्दी जारी गरेपछि स्वामी केशवानन्द गिरिको नेतृत्वमा शब्दकोश निर्माणका लागि काम शुरु भएको हो ।
कोशको मोबाइल एप हालसम्म तीन हजार जनाले डाउनलोड गरिसकेका छन् । डाउनलोड गर्नेबाट आएको प्रतिक्रिया सकारात्मक रहेको जनाइएको छ । एण्ड्रोइड फोनका फाइभ भर्जनभन्दा माथिका मोबाइलमा यो कोश खुल्ने गरेको छ । मोबाइल एप १२६ एमबीको भएकाले एक जिबी डाटा आवश्यक पर्नेछ ।
कोश एप र वेबसाइटमा उपलब्ध भएपछि यसका प्रयोगकर्ता ठूला ठूला शब्दकोश बोकेर हिँड्नुपर्ने, पल्टाउनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त भएका छन् । प्रयोगकर्ताका माझ यो सजिलो शब्दकोशका रूपमा आएको छ ।
राशीफल : आज आइतबार तपाईको धन प्राप्ति, यात्रा पारिवारिक सुख यस्तो देखिन्छ
आज कुन राशी हुनेलाई के गर्दा फाइदा होला ? हेर्नुस् राशीफल
कार्तिक नृत्यः यसरी हुँदैछ आज राति बराह नृत्य मञ्चन
मिथुनको योजना कार्यान्वयन गर्ने र मिनको भौतिक सम्पत्तिको जोहो हुने, अन्य राशीको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुस्
हरिबोधिनी एकादशी व्रत, तपाईको दिन कत्तिको शुभ होला ? हेर्नुस् राशीफल
स्वरोजगार लघुवित्तले लाभांश वितरण गर्ने, बोनस र नगद कति ?
प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सले १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने
युनाइटेड इदी–मर्दीको आइपिओ आज बाँडफाँट हुने
नौ मेगावाट क्षमताको दूधपोखरी चेपे जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने
बढ्यो पर्यटकीयस्थलमा चहलपहल, बन्दाबन्दीमै पनि आधा दर्जन नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान
आजको मौसम : तीनओटा प्रदेशमा बर्षा र हिमपातको सम्भावना
हुम्लाबाटै कैलाश मानसरोवर दर्शन, कसरी पुग्ने लिमि ?
उद्यमी टक सिरिज यस्तो रह्यो सातौं श्रृंखला, कसले के भने ?